Kuki Google na-akụda? | Martech Zone
Enwere m echiche a na ọ nweghị ihe ọ bụla nwere ike ịcha. Businesseszụ ahịa na-aga nke ọma na-akarị ikike ha nwere ijikwa uto ahụ, teknụzụ ndị na-arụ ọrụ nke ọma na obere obere anaghị adịkarị arụ ọrụ ahụ n'ọtụtụ buru ibu… ọbụlagodi ndị ọrụ na-akwalitekarị karịa ike ha.
Google ahụwo uto a na-enwetụbeghị ụdị ya n'afọ iri gara aga. Ruo oge ụfọdụ, anyị jidere ha na ihe ngosi ma jiri ha mee ihe dị ka nyocha nke ihe ịga nke ọma. Nyaahụ, anyị gbadara ụlọ mmanya ahụ, na-amalite ịchọpụta na mpụga mgbidi anyị ma lelee Google anya mgbe ihe na-enweghị isi na-eme.
Google Adịbeghị Anya:
Taa, m ga-ekwu okwu banyere blog enyi m Erik Blogger (Nwoke wakporo enyi nwanyị na cheeseburger), ma enweghị m ike ịnweta peeji nke okwu iji kwadoo.
Couplebọchị ole na ole, anyị enweghị ike ịdebanye aha na saịtị ọ bụla Njikwa Nchọta Google. Ebe nrụọrụ ahụ gara n'ihu na-enye anyị njehie nyocha na anyị na-eweghachi akara koodu ezighi ezi na 404 anyị (achọtaghị peeji nke). N'ezie, anyị ụlọ ọrụ ịde blọgụ n'elu ikpo okwu na-eweghachi koodu kwesịrị ekwesị. Otu ụbọchị ma ọ bụ karịa, ihe niile mere ọzọ!
Google Reader mgbe niile ka odi looped na m, na-egosi m faili ntanetịime na m na-ama na-agụ… ugboro ugboro.
Anyị mejuputara a Google Analytics akaụntụ maka onye ahịa n'izu a gosipụtara saịtị ahụ gosipụtara na ibe, ekwenyeghị na ibe ọzọ, ọ nweghịkwa stats ọ bụla. Anyị ga-ehichapụ akaụntụ ahụ ma bidoghachi.
MGBE: 12/21 - Kemgbe m gbanwere ndepụta m na Google, enweghị m ike ịbanye ma nweta stats m na adreesị ndepụta m na-anaghị emelite.
Naanị ihe Google yiri ka ọ gaghị ada ada na-egosipụta mgbasa ozi dị mkpa. Hmmmm.
Tags: mobile tinye-na-cart udumobile sdkschmapSliderstarbucksStarbucks mobile ngwaLelee ya ugbu a Ntụrụndụ
Dec 19, 2008 na 6:57 PM
Ọ dị mma ịmara na Google akabeghị ịnye anyị mgbasa ozi. M nwere ike ịghọta ụfọdụ nke free ọrụ ịbụ ala mgbe ụfọdụ, ma ihe na-echegbu m bụ mgbe ha "azụmahịa na klas" ngwa ọdịnala (Alojado mail, ngwa ọdịnala, wdg) na-amalite na-ala ọtụtụ awa ma ọ bụ ụbọchị na oge. Na-ekwughi ihe kpatara ya ma obu mgbe ha gha agha azu. Nke ahụ bụ oge furu efu, nke na azụmaahịa m pụtara ego furu efu. Ego m chere na m na-echekwa site na anaghị m agba ọsọ nke m.
Dee 22, 2008 na 11: 56 AM
Anọ m na-enwe nsogbu ụfọdụ na blogger m. Ghara ikwu, Alerts Google m na-aga bonkers. Obi dị m ụtọ na ọ bụghị naanị m na-ahụ nke a!